Soo Iibso Kartoon Hal -abuur Caano ah Digaag Ukun Ceramic Yolk/Kala -sooc Caddaan - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Noocyada Ukunta Nooca: Qaybiyeyaasha Ukunta
Waxyaabaha: Caaga, dhoobada
Shaqada: Kala -sooca Ukunta
Midabka: huruud, casaan
Adeegsado: kala -sooca ukunta cad iyo kala -sooca ukunta, Si Fudud Loo Adeegsado
Kala -soocaha ukunta ayaa leh qaab digaag kartoon ah, kaas oo ay ka buuxaan wax cusub oo qurux badan.
Kala -sooca ukunta ayaa ku habboon in la isticmaalo oo ay fududahay in la nadiifiyo.
Qalabkan hal -abuurka ah, wuxuu si wax ku ool ah kaaga caawin karaa inaad si dhaqso ah u kala saarto ukunta.
Waxay ku habboon tahay jikada, hudheelka, makhaayadda iwm.
Tusmada Xidhmada: 1 x Kala -sooca Ukun Digaag